ग्रिन टिकाे बढदाे प्रयाेग : याैनशक्ति ,स्मरण शक्ति बढछ त? | Himal Times
Home Flash News ग्रिन टिकाे बढदाे प्रयाेग : याैनशक्ति ,स्मरण शक्ति बढछ त?
ग्रिन टिकाे बढदाे प्रयाेग : याैनशक्ति ,स्मरण शक्ति बढछ त?
विपेन उलङगे । हिमाल टाईम्स
हिजोआज “ग्रिन टि’ अर्थात् जैविक हरियो चिया निकै चल्तीमा छ। नेपालमा ग्रिन टि काे प्रयाेग ब्यापक हुन थालेकाे केहि बर्षहरु मात्र भएकाे छ । यधपी ग्रिन टिमा सकरात्मक नेपाली तथा बिदेशिहरु उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन ।
नेपालको ग्रिन टिले नेपालमा मात्रै हैन बिदेशमा पनि राम्रै बजार पाएकाे छ । अहिले बिदेश निर्यातको प्रमुख नेपाली उत्पादन मध्यमा ग्रिन टि पनि पर्छ । ग्रिन टिका नाममा काठमाडौंका धेरै स्थानहरुमा चिया पत्ति बेच्ने पसलहरु रहेका छन भने अधिकास हाेटल , रेष्टुरेन्टमा ग्रिन टि पिउन पाईन्छ ।
चियाको प्रयोग प्राचीनकाल देखि नै भएकाे पाईन्छ । चिया सम्बन्धि बिभिन्न किपदन्ति देखि बैज्ञानिक प्रयाेग बारेका तथ्यहरुमा पनि रहेका छन । केहि तथ्यअनुसार चिया चिनबाट सुरु भएकाे बुझिन्छ । प्राचिनकाल मै चिया पत्ति जडिबुटी रकाे रुपमा रहदै अाएकाे छ । त्यतिबैले विविध रोगबाट निर्मुल हुन चियाकाे उपयोग गरिन्थ्यो।
ग्रिन टिका बारेमा संसारका वैज्ञानिकहरुले अध्यन गरेर बिभिन्न तथ्यहरु पत्ता लगाएकाे छन । ग्रिन टि बेफाइदा भन्दा मानवीय स्वास्थ्यका लागि फाईदानै देखिन्छ । हरियो पत्ती चिया ९ग्रिन टि०का विविध फाइदाहरु मध्य क्यान्सर, रक्तचाप, कोलस्ट्रोल, ग्याष्ट्रिक र अल्जाइमर्सजस्ता रोगलाई कम गर्न भूमिका खेलेकाे देखिन्छ तर ग्रिन टिले कसरि यस्ताे भुमिका खेल्याे भन्ने बारे चियामा पाईने तत्वहरु बारे थप अध्यन पनि बिज्ञहरु गर्दै छन् ।
ग्रिन टि लगायत अहिले बजारमा बिभिन्न खाले चियाहरु पाईन्छन । बिशेष गरि चिया चार प्रकारले बर्गिकरण गरेकाे देखिन्छ । जस्तै ह्वाईट टि , ग्रिन टि , वलाङ टि र बल्याक टि । त्यसो त नेपालमा मात्रै यि चार बर्गिकरण भित्र रहेर दर्जनौं प्रकारमा चियाहरु उत्पादन हुने गरेका छन । ह्वाईट टि अर्थात सेताे चिया संसारमै महाेङगाे चियामा पर्छ भने प्रमुख प्रचलित चिया भनेकाे बल्याक टि अर्थात कालाे चिया ससस्ताे चियामा पर्छ । मध्यम र अहिले बिश्व बजारमा प्रमुख बजार अाेगटेकाे चिया भनेकाे आर्गानिक ग्रिन टि अर्थात जैविक हरियो चिया हाे ।
नेपालमा ग्रिन टिकाे प्रचलन बिस्तारै बढदै जाने क्रममा यसलाई नेटवर्किङ मार्केटिङ रुपमा बिक्रि बितरण गर्ने चलन बढेपछि झन यसले नेपालमा ब्यापक चर्चा पायाे । हर्बाे, ग्रिन हाेप जस्ता नेटवर्किङ कम्पनी र अन्य प्रत्येक्ष बिक्रि बितरणकाे उपाए अपनाएका कम्पनिहरुले पनि यसलाई प्रमुख उत्पादनकाे रुपमा देखाउदै बिक्रि गरे । यधपी यि कम्पनीहरुले महाेङगाे र बिभिन्न प्रलाेभनमा देखाउदै ग्रिन टि बेचेपछि सरकाले यस्ता कम्पनीहरुमा कडाई गय्राे । अहिले नेपालमा ग्रिन टि उत्पादन कम्पिन , बिक्रि पसलहरु पनि प्रसस्तै मात्रामा रहेका छन ।
काठमाडौं ठमेल क्षेत्रमा यस्ता चिया बेच्ने पसलहरु प्रसस्तै रहेका छन । त्यस्ता चिया पसलहरुले स्वदेशी तथा बिदेशि ग्रहाकलाई चियाकाे स्वाद चखाउदै चियाकाे बारेमा फाईदाहरु बताउदै चिया बेच्ने गरेका छन । ठमेल स्थित ग्रिन अार्गानिक एभिन्यु नामक चिया पसलका सञ्चालक डिके गुरुङकाे अनुभबमा पनि ग्रिन टिनै बढि बिक्रि हुने गरेकाे बताउछन । उनि भन्छन ू हाम्राे पसलमा ग्रिन टि मात्रै चार थरिकाे छ । सिन्छा ग्रिन , बान्छा ग्रिन, पेयरल ग्रिन , कर्ली ग्रिन लगायत रहेका छन । यि चियाहरुमा पनि भिन्न ( भिन्न स्वाद हुन्छ । तर फाईदा सबैकाे उस्तै हुन्छ । हामीले यहाँ अाउने ग्राहकलाई चियाकाे स्वाद चखाएर मात्रै बेच्छाै । साथै ग्रिन टि सबैले ब्यक्ति सेवन गर्दा राम्राे हुन्छ । तर गर्भवती महिला र बच्चाहरु र प्रेसर कम भएका ब्यक्तिहरुले थाेरै ठिक्क खाने सल्लाह दिने गरेकाे गुुरुङले बताए ।
नेपालको हरियाे चिया , कालाे चिया लगायतका चियाहरु विदेशी राष्ट्रहरुमा माग बढेकाे ब्यबसायिहरु बताउछन । तर यसलाई सरकारि तवरबाट अलि राम्राे संग ब्यबस्थापन गर्न सके नेपालकमे चिया बिश्व बजारमा राम्राे माग अाउने जानकारहरु बताउछन ।
हरियो चियामा पाइने इजिसिजी नामक तत्वले मस्तिष्कको क्रियाकलापमा तात्विक भिन्नता ल्याछ । स्वस्थ मानिसमा चिया पिउनाले स्मरणशक्ति बढाउछ। हिरियाे चियाले मानिसलाई बुढ्यौलीमा लाग्ने रोगहरु डिमेन्सिया र अल्जाइमर्सका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने केहि अध्यनहरुले देखाएकाे छ ।
त्यसाेत हरियाे चियाले स्मरण शक्ति बढाउने, याैनशक्ति बढाउने , साैन्दाैर्य कायम, राेगहरुकाे निर्मुल जस्ता अाकर्षक फाईदाहरुकाे प्रचार रहेकाे छ । यधपी याे नै सतप्रतिशत भनेर अध्यनले ठाेकुवा त गरेकाे छैन । तर अध्यन सकरात्मक रहेकाे भने देखाउछ।
Previous articleनेपाल आयल निमगमले विभिन्न पदका लागि दरखास्त माग
Next articleमलेसिया बिरुद्ध नेपालीको लगातार तीन वटा जित
जसपा औपचारिक विभाजनको घोषणा हुँदै
प्रेमिकाको मृत्युपछि विक्षिप्त बनेर संसार घुम्न निस्किए; सँगै गएको कुकुरले बनायो विश्व कीर्तिमान
भारतमा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५० हजारमा झर्‍यो, कुल सङ्क्रमित भने ३ करोड
Himaltimes - June 23, 2021
विद्यार्थीद्धारा थाल ठटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको विरोध
म्यान्मारका नागरिकलाई अमेरिले केही समय संरक्षण दिने